ट्याक्सी ड्राइभर पहिलो पटक मैले कसरी र कहिले हेरेँ, याद छैन । तर हेर्नेबित्तिकै मलाई त्यो आफ्नै कथाजस्तो लाग्यो । रातमा काम गर्नेहरूको कथा । निशाचरहरूको कथा ।
ट्याक्सी ड्राइभर चलचित्रमा ट्राभिसको भूमिकामा रोबर्ड डे निरो ।
घरबाट बाहिर निस्किनेबित्तिकै देखेँ– बाटो छेउमै एउटा पहेँलो रङको ट्याक्सी उभिइरहेको थियो । ट्याक्सीको ड्राइभर सिटमा ‘ट्राभिस विकल’ एक थान भावविहीन सपाट अनुहार लिएर मतिर हेरिरहेको थियो ।
मैले हिजो भर्खर मार्टिन स्कोर्सेसीको कालजयी तथा मेरो सर्वप्रिय फिल्म ट्याक्सी ड्राइभर १२२ औँ पटक हेरेको थिएँ । आज त्यही फिल्मको प्रमुख पात्र मेरो अगाडि उभिएको थियो, उही पहेँलो ट्याक्सी लिएर ।
ट्याक्सी ड्राइभर र मेरो उमेर लगभग उस्तै छ– २६ वर्ष । उसको र मेरो समस्या पनि लगभग उस्तै नै छ– राती निद्रा नलाग्ने । ट्राभिस पहिला आर्मीमा थियो । उसले भियतनामको युद्ध लड्यो । जित्यो ? पदक पायो । सम्मान पायो । तर उसले आफूलाई चाहिँ गुमायो ।
उसले लडेको युद्ध कसका लागि थियो ? त्यो जित कसका लागि थियो ? ट्राभिस फर्केर आएपछि उसलाई निद्रा लाग्न छाड्यो । समाजमा घुलमिल हुन उसले सकेन । जान्दै जानेन । समाज उसले छाडेको ठाउँभन्दा धेरै अगाडि पुगिसकेको थियो । तथाकथित महान् युद्धको वाछिटा परेको ऊ अनिद्राको पीडित भयो, मजस्तै । भलै, म कुनै युद्धमा सहभागी भएको छैन तर पनि राम्रोसँग नसुतेको लगभग ६ वर्षजति भयो होला ।
मलाई राती निद्रा लाग्दैन । त्यसैले रातीमै काम गर्छु । भनौँ, म राती काम गर्छु, त्यसैले मलाई राती निद्रा लाग्दैन ।
मैले दाहिने हातमा बाँधेको घडी हेरेँ । रातको १०:३० बजेको थियो । मेरो काम रातको ठीक ११:३० बाट सुरु हुन्छ । म सहरको सबैभन्दा प्रख्यात मुर्दाघरमा मुर्दा कुर्ने काम गर्छु । यदि यो एउटा आम रात हुँदो हो त म देशमा भर्खरभर्खर आएको ऐतिहासिक रेल चढेर आफ्नो काममा गइरहेको हुन्थेँ । तर आज त मलाई लिन ट्याक्सी ड्राइभर नै आएको छ, पहेँलो ट्याक्सी लिएर ।
ट्याक्सी ड्राइभर र मेरो यो भेट पहिलो पटक भएको थिएन । यो हाम्रो १२२ औँ भेट थियो । मैले ट्याक्सी ड्राइभर फिल्म हेरेपछि त्यसको भोलिपल्ट ट्राभिस मलाई भेट्न आइपुग्छ । हाम्रो भेट जहिल्यै म बस्ने घरको बाटोको छेवैमा हुन्छ– ठीक १०:३० बजे । अनि, म उसको ट्याक्सी चढेर मुर्दाघर जाने गर्दथेँ । यो क्रम मैले पहिलो पटक ट्याक्सी ड्राइभर हेर्न थालेदेखि नै सुरु भएको थियो, जुन आजसम्म चलिरहेछ ।
‘यो सहरमा धेरै प्रदूषण छ, यार । मलाई प्रदूषण देखेर धेरै दिक्क लाग्छ ।’ ट्राभिसले एक दिन मलाई सुनायो । यो कुरा उसले फिल्ममा पनि भनेको छ । फिल्मभरि ऊ सहरको प्रदूषण र त्यसलाई सफा गर्नुपर्ने कुरा मात्रै गर्छ । गरिरहन्छ ।
‘मलाई पनि ।’ मैले ट्याक्सीको बाहिर हेर्दै भनेँ । बाहिर सहरमा केही थान मान्छेहरू हिँडिरहेका थिए । ट्याक्सी ड्राइभरको भाषामा भन्नुपर्दा प्रदूषणहरू अघि बढिरहेका थिए ।
सडकमा भेटिने चोर, हत्यारा, फटाहा, लुटेरा, वेश्या, भिखारी, दुर्व्यसनी आदि सबैलाई ऊ फोहोर भन्थ्यो । यो सबै नहटाएसम्म सहर सफा नहुने उसले मलाई सुटुक्क भनेको थियो । उसले युद्धमा मान्छेहरू मारेको थियो । तर पनि उसलाई हत्याराहरू मन पर्दैन थियो । ऊ आफूले मान्छे मारेको विषयमा केही बोल्दैन वा बोल्नै चाहँदैन । ऊ सय वटा मुसा मारेर त्यसको पाप पखाल्न तीर्थयात्रा जाने एउटा बिरालो हो ।
उसलाई वेश्याहरू पनि मन पर्दैन थियो । तर ऊ प्रत्येक साता अश्लील चलचित्र हेर्न जान्थ्यो । उसलाई यौनकर्मी मन पर्दैन तर यौन मन पर्थ्यो ।
ट्याक्सी ड्राइभर तपाईं–हामीजस्तै नै छ, विरोधाभासै विरोधाभासले भरिएको । म बाहिर एक थोक भन्छु तर भित्र अर्को थोक गर्छु । तपाईं पनि एकचोटि आफूले आफैँलाई आदर्शको कसीमा नापेर हेर्नुस् त ? आफूले आफैँलाई कस्तो पाउनु हुन्छ ? तपाईं समाजमा भेदभाव हुनु हुँदैन भन्नुहुन्छ तर नजानिँदो पाराले भेदभाव गर्नुहुन्छ । मलाई त्यसैले त ट्राभिस विकल मन पर्थ्यो । किनभने ऊ ठ्याक्कै मैजस्तो वा तपाईंजस्तै विरोधाभास नै विरोधाभासले भरिएको थियो ।
मैले मुर्दाघरमा काम गर्न थालेको ठ्याक्कै ५ वर्ष भइसकेको थियो । मलाई इन्सोम्नियाले छोएको ठीक एक वर्षपछि यो काम पाएको थिएँ । म आफ्नो अनिद्राको सदुपयोग गर्ने काम खोजिरहेको थिएँ । सहरको प्रख्यात मुर्दाघरमा राती काम गर्ने एउटा चौकीदार चाहिएको रहेछ । कामको एउटै सर्त थियो– राती सुत्न पाइँदैन । त्यो सुनेर म मनमनै बहुत मुस्कुराएँ ।
मुर्दाघरमा काम गर्ने म एक्लो थिइनँ । त्यहाँ ‘एड्गार एलान पोए’ को ‘टेल टेल हर्ट’ कथामा भएको गिद्धको जस्तो आँखावाला बूढोचाहिँ मुर्दा कुर्ने काम गर्थ्यो । म चौकीदारी गर्थें, बूढो मुर्दा कुरेर बस्थ्यो ।
बूढोको एउटा खुबी थियो– ऊ आँखा हेरेरै सुत्न सक्थ्यो । त्यसैले कसैलाई पनि बूढो काममा सुतिरहेछ कि उठिरहेछ भन्ने थाहा हुँदैन थियो ।
एक दिन अचानक मुर्दाघरमा बूढो आफैँ मुर्दा भयो । मुर्दाघरमा एउटा ठूलो हल थियो । त्यही हलमा मुर्दाहरू मिलाएर राखिएको हुन्थ्यो । उसको लास पनि मुर्दाघरको त्यही हलमा मिलाएर राखियो । बूढोले आफ्नो लास पनि त्यही मुर्दाघरमा मिलाएर राखिन्छ भन्ने सायदै सोचेको थियो होला ।
यो मुर्दाघरमा कैयन् लासहरू मिलाएर राखिएको छ । यहाँ छोराको हत्यारालाई सजाय माग गर्दागर्दै मृत्युवरण गरेका एक बाबुको लास पनि राखिएको छ । कहिलेकाहीँ तिनको लासमा पनि राजनीति गरिन्थ्यो । यहाँ जातको नाममा प्रेमिकाका आफन्तहरूले घाँटी न्याकेर मारिएको एउटा महान् प्रेमीको लास खाल्डोबाट उत्खनन गरेर ल्याई राखिएको छ ।
जस्तोसुकै भयानक प्रकृतिको लास भए पनि उनीहरूलाई मिलाएर नै राखिन्थ्यो । राजनीतिमा जसले राम्रोसँग लासको व्यवस्थापन गर्‍यो, उसले चाँडो प्रगति गर्छ भनेर एउटा हल्ला व्याप्त थियो । मुर्दाघरभित्रको कुनामा अझ भयानक–भयानक लासहरू पनि छन् । अहिलेलाई यो विषय छाडौँ, लासहरूबारे म एक दिन बेग्लै भनौँला ।
बूढो मरेपछि मैले उसको त्यो मुर्दा कुर्ने काम गर्न थालेँ । तर मेरो ठाउँमा नयाँ चौकीदार कोही पनि आएनन् । कतिले बूढोको हत्या मैले नै गरेको हुँसमेत भनेका थिए रे तर मलाई याद छैन । हिजोआज मलाई धेरै कुरा याद हुन छाडेको छ । कुनै बेला ट्याक्सी ड्राइभर हेरेपछि त्यसैबाट प्रभावित भएर जोन हिन्क्ले जेआर नामक मान्छेले अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनको हत्या गर्ने प्रयास गरेका थिए । एउटा फिल्मको कस्तो भयानक प्रभाव । सायद त्यसै फिल्मबाट प्रभावित भएर मैले पनि बूढोको हत्या गरेँ कि ? थाहा छैन । हुन पनि सक्छ ।
निद्रा नपर्ने मान्छेको दिमागबाट धेरै कुराहरू हराउन थाल्छन् । उसको स्मरण शक्ति खिइँदै जान्छ र दिमागमा भयानक कुराहरू खेल्न थाल्छन् । मैले आफ्ना कयौँ रात मूर्दाहरूसँग बोलेरै बिताएको छु । मुर्दाघरमा म एक्लै जीवित व्यक्ति हुन्थेँ । तर मलाई मचाहिँ मृत र सारा मुर्दाहरू नै जीवित मान्छेहरू हुन् कि जस्तो लाग्थ्यो । मुर्दाहरू सास नफेर्ने लास हुन्, म सास फेर्ने लास हुँ । संसारमा तपाईं हुनु र नहुनुले कसैलाई पनि कुनै फरक पार्दैन भने तपाईं हुनुको कुनै अर्थ छैन । ट्राभिसलाई यो समाजको हिस्सा हुन मन थियो । उसलाई शान–ओ–शौकत केही पनि चाहिएको थिएन । मात्र समाजले उसलाई स्वीकार गरिदिए पुग्थ्यो ।
म ट्याक्सी चढ्नेबित्तिकै ट्राभिसले ट्याक्सी कुदाइहाल्यो । उसको ट्याक्सीमा कालीप्रसाद रिजालको कालजयी ‘दुई कदम साथै हिँड, छुट्टिनु त छँदै छ’ गीत बजिरहेको थियो । त्यो गीतका प्रत्येक शब्दहरू सीधै उडेर मतिर आएजस्तो लाग्छ । यस्तो लाग्छ, शब्दहरू एकअर्कासँग म्याराथन दगुरिरहेका छन् । ट्राभिस र म दुई कदम साथै हिँडिरहेका थियौँ र हामी मुर्दाघरमै पुगेर छुट्टिन्थ्यौँ ।
मैले मुर्दाघरमा जुनीजुनीसम्म नछुट्ने कसम खाएका जोडीहरू पनि छुटेको देखेको छु । त्यसैले पनि मलाई कालीप्रसाद रिजालको उक्त गीत मन पर्थ्यो ।
मैले नै उसलाई सिफारिस गरेको यो गीतबाहेक उसले अरू गीत आफ्नो ट्याक्सीमा बजाएको मलाई याद छैन । हुन त मलाई आजकाल के नै पो याद हुन्छ र ! सबै बिर्सिन्छु । कहिलेकाहीँ त लाग्छ, म एक दिन सास फेर्न बिर्सिएरै मर्छु होला । एक्लोपना र अनिद्रा, तपाईंले सोचेभन्दा भयानक कुरा हुन्छन् । जब तपाईंलाई आफू किन यो संसारमा छु, कसका लागि छु भनेर थाहा हुन छाड्छ, तब तपाईं ठूलो द्वन्द्वमा फस्नुहुन्छ । तपाईं आफू यो संसारमा छु भनेर देखाउनकै लागि जेसुकै पनि गर्न तयार बन्नुहुन्छ ।
म प्राय: कालो कफी पिउँछु । सुरुमा मैले कफी रहरले पिउन थालेँ । एकचोटि कुन्नि कसले हो, असली कफी खानुको मजा चिनी नहालेको कालो कफीमा हुन्छ भनेर मलाई सुनायो । मैले असली मजा लिने कोसिस गरेँ । सुरुको २–४ पटक गाह्रो भयो । पछि सहज भयो । बानी पर्‍यो । लत लाग्यो । कुलत भयो । संसारमा धेरै कुराहरू लहडमा सुरु हुन्छन् र कुलतमा गएर अन्त्य हुन्छन् ।
ट्याक्सी ड्राइभरले आफूले आफैँलाई खोज्ने ठूलो प्रयास गर्‍यो । तर उसले कतै पनि आफूलाई पाएन । आफूलाई खोज्ने लहडमा सिद्धार्थ गौतम घर छाडेर टाढा गए । जंगल बसे । आफूलाई खोज्ने लहडमा म पनि यो संसारमा छु है भनेर जानकारी दिन ट्याक्सी ड्राइभरले हत्या गर्‍यो । मैले पनि आफूलाई खोज्ने कोसिस गरेँ । तर उसले जस्तो हत्या गर्न सकिनँ । म एक्लो मात्र हैन, डरपोक पनि छु । तपाईं पनि डरपोक हुनुहुन्छ । तपाईं र मैले आफ्ना सपनाहरूको बाहेक अरू केहीको पनि हत्या गर्न सक्दैनौँ ।
लगातार १८ घन्टासम्म काम गर्दा पनि सुत्न नसक्नुको पीडा कि म बुझ्छु, कि ट्राभिस बुझ्छ । थकाइ लाग्छ, निद्रा लाग्दैन । वाँणको शैयामा सुतेका भीष्म पितामह घाउ दुखेर रुन्थे, कराउँथे, मर्न खोज्थे तर मर्न सक्दैनथे । हामी सबै आधुनिक भीष्म पितामह हौ । लाचार ।
त्यो बेला सायद म अनिद्रासम्बन्धी फिल्महरू खोज्दै थिएँ । र, ‘फाइट क्लब’ हेरिसकेपछि लगत्तै मैले ट्याक्सी ड्राइभर हेरेको थिएँ । मैले धेरै पछि मात्रै थाहा पाएँ, अनिद्रा भयानक ठूलो रोग हो ।
एक दिन ट्राभिस कुटाइममा मुर्दाघर आयो । मैले हिजो ट्याक्सी ड्राइभर हेरेको थिइनँ तर पनि उसको र मेरो जोगले हुन्छ भेटवाला भेट भयो । हिजोआज उसले आफ्नो ट्याक्सीलाई शव वाहन बनाएको रहेछ । विश्वमा महामारी फैलिएसँगै जिउँदो मान्छेभन्दा मरेका मान्छेहरू धेरै हुन थालिसकेका थिए । लासहरूको पनि इज्जत लुटिएको उसले सुनेको थियो । लासहरूमाथि राजनीति गरेको त झन् उसले आफ्नै आँखाले देखेको थियो । ऊ लासहरूसँग पैसा नलिई तिनको ओसारपसार गर्थ्यो ।
उसले ट्याक्सीबाट एउटा फ्रेस लास निकाल्यो अनि मेरै अगाडि छाडेर गयो । आज पहिलो पटक ट्राभिस मसँग केही नबोली गएको थियो । म ट्वाल्ल परिरहेँ । मैले लासको अनुहार हेरेँ– त्यसको अनुहार मेरो अनुहारसँग मिल्थ्यो । त्यो मेरै लास थियो तर म को हुँ ? मैले बिर्सिएँ । त्यसपछि ट्राभिसले ल्याएका सबै लासहरूको अनुहार मेरो अनुहारसँग मिल्न थाल्यो ।
सहरको प्रख्यात अखबारहरूमा भोलिपल्ट पनि सधैँझैँ समाचार आइरहेका थिए । नयाँ केही थिएन ।
क्वारेन्टाइनमा एक युवकको मृत्यु ।
उच्च जातका व्यक्तिहरूद्वारा प्रेम गरेको आरोपमा दलितको हत्या ।
भोकको कारण घरमै गरिबको मृत्यु ।
परदेशबाट हिँडेर घर आइपुग्नेबित्तिकै एक महिलाको मृत्यु ।
तर यस पटक भने प्रत्येक समाचारमा मेरो फोटो थियो । प्रत्येक पटक म मरिरहेको थिएँ । ए, हैन हैन । म मरेको थिइनँ । मलाई प्रत्येक पटक मारिएको थियो ।
ऐना हेर्नुस् त– म नै तपाईं हुँ ।